I-'go 'yinkqubo ye-AI ezalisa i-autopilot ye-avatar-bio-robot: uMartin Vrijland
I-'go 'yinkqubo ye-AI ezalisa i-autopilot ye-avatar-bio-robot
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Julayi 2019	• 13 Comments
Ngubani nqaku malunga nabantu abahlazileyo (I-NPCs) sele sele iqonda ukuba igama elithi "ingqondo" okanye "umphefumlo" lingafaniswa noxhumo olungenazintambo phakathi kwesikhombiselwano sengqondo kunye ne-avatar ngokufanisa. I-avatar ekulinganiseni, njengokuba kunjalo, ilawulwa ngaphandle kwaye iphefumlelwe. Kulo nqaku ndathetha ngokufutshane malunga ne-AI program eqhuba ingqondo ye-avatar. Kule nqaku ndifuna ukucacisa oko. Isihloko ngokwenene sityhawula umboniso wam ngalolu hlobo: 'I-ego' yinkqubo ye-AI ezalisa umzenzeli we-avatar-bio-robot. Makhe ndicacise oku ngaphantsi.
Ukuba sicinga ukuba imizimba yethu yomntu (kubandakanya ingqondo) yi-avatars ngokulinganisa, ngoko kukho umgca othile kwindawo yomdlali wokuqala; oko sikubiza ngokuba yimpumelelo. Kwinqaku edibeneyo ndacacisa ukuba kukho ii-avatars ezinzulu (NPCs) ezijikelezayo. Ngoko ezo zi-avatars ezingasebenzi ngaphandle. Nangona kunjalo abo bantu banokukwazi ukuhlangabezana naluphi na uhlobo lomzwelo, ukuzalisekisa iinkqubo zokucinga eziphezulu (ukufunda, ukwenza umsebenzi, njl njl) nokukwazi ukunandipha ubugcisa nomculo. Kulo nqaku ndaphinda ndiqhathanise namarobhothi avela kwi-series ye-Netflix ethi 'Abantu abaNene' kwaye bathunyelwa kwifilimu yokuTshintshela. Ngenxa yokulungelelanisa, masicinge ukuba ingqiqo yobuchule (AI) iya kufinyelela kwizinga 'lobunzima babantu' kungekudala. Emva koko unako ukunika i-robot ingqondo kwaye akukho mntu uya kukwazi ukubona umahluko 'nomntu wangempela' kwakhona.
Kungasenokuba nzima kumfundi oqhelekileyo ukuba sibone ukuba siphila kwisimo sokufanisa, kuba yonke into esiyichukumisayo, yabona, iphunga, iva kunye neyona nto ifana nokuphila okunjalo. Oko kukungaqondi kakuhle. Ukuba usondeza nge-super-microscope esihlalweni ohleli kuyo okanye etafileni emva kokuba ufunda oku, uphelisa ngeendawo ezinkulu ezingenanto phakathi kwezinto ezithile zeamolekyu kunye nama-athomu abakhayo. Yaye ukuba wenza uvavanyo oluthile lwefilosofi (i-slits double experiment), ngoko kubonakala ukuba umcimbi ukhona kuphela ukuba kukho umbonisi. Oku kukukhumbuza iiglasi zeVR, apho ihlabathi elingemva kwakho lingekho, ngokungakhathaliseki ukuba awuyi kuguqula ikhanda lakho apho. Kwindlela yokumisa umdlalo wamaninzi, ukuqwalaselwa komdlali ngamnye kufuneka kudibaniswe. Ku luncedo ukuphonononga ngokujulile kwiingcaciso ezilandelayo emva kokulinganisa, ngokuya kwinto ethi 'ukulinganisa' apha kwiwebhusayithi kwaye ufunde ukuqonda imfundiso emva kwayo.
Ukucinga ukuba ugcine ukulinganisa, ngoko-ke awunayo avatar yakho yomzimba (umzimba wakho ngengqondo), kodwa ungumdlali wangaphandle ogcina kwaye udlala lo mzekeliso ngokusebenzisa avatar yakho yomntu. Isikhundla sam ke ngokokuba kukho ezininzi izibhengezo zabantu ezihamba ngeenxa zonke ezingenawo ulawulo lwangaphandle kwaye apho kungekho mbonisi / umdlali wangaphandle. Kwiimeko zonke, nangona kunjalo, i-avatar yobuntu ihlakaniphile. Olu bulumko lobuchule (AI), njengoko kunjalo, luhlelwe kwi-bio-brain of the avatar avatar. Inkqubo ephambili sele isele kwi-DNA kwaye idluliselwa kwinkqubo yokuvelisa i-avatars (inkqubo yokuziphendulela, ukukhulelwa nokuzalwa) kwi-avatar elandelayo. Iprogram yokuqala yolochopho lusetyenziswa yi-avatars yomzali kunye nenkqubo yokwenza yonke into eyenza i-avatar ibambe. Inkqubo yokucwangcisa ithathwa luluntu.
Inkqubo ye-AI yobungqina be-AI iphambili kakhulu kangangokuthi kubonakala ukuba iyona nto ifanelekileyo yokuphulaphula. Yiloo nto esiyibiza ngokuthi "ego" kwizengqondo ezithandwayo. Ndikhetha ukuyibiza ngokuba yi-AI program elawula i-avatar-bio.
Ngenxa yokuba sizungezwe i-avatars yabantu eneprogram enamandla kakhulu kunye neye-Ago ye-AI kwaye sibona impumelelo yalezi ziphumo ze-avatars njengendlela yokuya phezulu, sithatha ukuthatha inkqubo yoqwalaselo kunye ne-AI kwi-biobrain yethu kwinxaxheba ukuzalisekisa ubomi bethu.
Nangona kunjalo, ukuba sihlala sihlala sikhumbula ukuba le nkqubo ye-AI ivela kumakhi walo mlinganiso (nangona loo nkcazelo ye-Intelligence AI ibonakala iyifunde ngakumbi kwaye ngoko iba yingqiqo) ngoko siya kufunda ukuhlula phakathi kwezigqibo ngubani owenza i-avatar yethu yobuntu ngokusekelwe kwiprogram ye-AI okanye izigqibo esekelwe uxhumano lomphefumlo ongenawucingo kunye 'neyokuqala'.
Unokuphikisa ukuba inkqubo ye-AI yesimo sethu se-avatar-bio sinokukwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kulo mzekeliso, kodwa ke ucinga ukuba 'umdlali wangempela' akayi kuqonda okanye ayinakukwazi ukujonga. Makhe sicinge ukuba umdlali unokujonga ngokubhekiselele (angayamela i-field total play) kwaye ngoko unokukwenza izigqibo ezingcono. Ngaba akukuhle ukugqitha inkqubo ye-AI yengqondo yethu ye-avatar-bio (kunye nenkqubo evalwe kwi-DNA)? Akukuhle ukuphulaphula uxhumano lomphefumlo kwakhona nokuthembela oko?
Oku kunzima, kuba inkqubo ye-AI iyavuya ukuthatha ulawulo ngokuphindaphindiweyo. Ukuba uninzi lwabantu abakujikelezile lukhuselekile kwaye ngoko luphila kwi-AI yohlelo lwayo, uya kuthatha ukukhetha ukuzinikele ngokupheleleyo kwi-AI program. Enyanisweni, ulungiselelwe ukususela kumncinane ukuya ku- ngakumbi ukuba unaloo mdibaniso womphefumlo ongenawucingo - ukungawuphulaphuli olo xhumo. Uya kulungiswa ukuphulaphula iprogram yakho ye-bio-brain AI. Iprogram yakho ye-bio-ingqondo ye-AI iqeqeshwe ukususela kumncinane kwaye wena (yakho avatar) uyavuzwa okanye ujeziswe kule nkqubo yoqeqesho. Yiyo leyo inkqubo yezemfundo kwaye yisoko sibona le nkqubo yezemfundo iqala ngobuncinane.
Ngoko kubalulekile ukuba ufumane kwakhona uxhumano lomphefumlo wakho ongenawucingo kwaye ke kubalulekile ukuba uvumele ukuba umnxibelelwano womoya ungenakho ukulawula. Inkqubo ye-AI eqhuba i-bio-avatar yakho yenza ukuba ukholelwe ukuba lo mlinganiso ubaluleke kakhulu. Qala ukufumanisa ukuba udlala ngokufanisa kwaye uphulaphule yakho yokuqala ngokusebenzisa uxhumano lomphefumlo wakho ongenawucingo!
Ngaba baninzi abantu abasondelene nawe (imizimba engaphiliyo)?
Abantu bangathetha njani 'ukuqonda' kwaye ngexesha elifanayo banceda ukugcina inkqubo?
Inkampani ye-Elon Musk ye-Neuralink ye-neural lace iya kuvela ngqo kwiDARPA (nje nge-intanethi kunye nee-smartphone)
Indalo yinto yokufanisa: yonke inkolo, yonke inkolelo inkohliso
Imfundiso yokulinganisa yabafundi abaphambili
tags: ai, avatar, ego, eziziimbalasane, ingqiqo, inkqubo, ukulinganisa, uxhumano lomphefumlo
11 Julayi 2019 kwi-13: 17
Echoes okanye iGenesis
Sekunjalo, kukho umjikelo oqhelekileyo kwingcamango yokuba kukho umfanisi, okanye umdali, onyamekelayo ngathi. Ngokufanayo, imbono yokuba umntu ophakamileyo obumba iphela yendalo ihambelana nombono wobuThixo obumba ihlabathi-ngokomzekelo, njengoko kuchazwe kwiNcwadi yeGenesis.
11 Julayi 2019 kwi-13: 27
Kwimeko, andicinga ukuba umakhi walo mzekeliso "uyasikhathalela". Bona inqaku phantsi kwekhonkco lokugqibela kwinqaku.
Ukuba inkolelo yokufanisa iqhutywe ngandlela-thile inxulumene nenyaniso yokuba abantu bafuna ukunciphisa umda ukuba banamkele ubuntwini ubuninzi be-Luciferian AI: kwinkqubo yesifo
11 Julayi 2019 kwi-13: 29
Kanye emva kwexesha, ukuvuna amandla ngokusebenzisa ukuphathwa kwinto ebonakalayo kwimeko esiphila kuyo ngoku. Sitshutshiswa nje ngokomoya.
11 Julayi 2019 kwi-14: 27
I-avatar ye-AI yomntu ngoku uxakeke ukwakha ukufanisa okutsha kunye nama-avatars angenza okufanayo kunye nesimo sethu sengqondo somntu:
Iprojekthi yoLwazi loPhuhliso loPhando loPhuhliso oluPhezulu oluPhezulu oluqhubekayo, olujolise ukubonakalisa ingqiqo yoluntu kwinqanaba le-18-nyanga ubudala. UMansinghka ungomnye wophando oyintloko kule projekthi.
11 Julayi 2019 kwi-14: 30
Indlela ephezulu yokwenza ukuba uyilibale umxhelo wakho womphefumlo kukuba ukwakha ukulinganisa ngaphakathi kwendlela yokufanisa.
Kwaye ukuba unokwenza ukuba isibalo somntu sikholelwe ukuba ukudibanisa ne-AI entsha kukukwenza ukuba ungafi, unokuhlasela iseli se-stem, ngenxa yokuba ezo ntlobo zokuqala zentliziyo zizenza zifumaneke kwi-AI entsha (ngaphakathi kwenkqubo yesifo sengculaza ye-Luciferian yangoku)
Khangela le ngcaciso:
11 Julayi 2019 kwi-20: 07
Ihlala inzima kakhulu ukuqonda ngokuqonda nangokwemvakalelo into abafana abayifunayo kwiskripthi. Ndicinga ukuba kukho ukukhangela indlela yokuphila emva kwakho / ukufa ngokulayisha yakho / ukuqonda kwi-matrix ngoku kuphuhliswa ngabafana abafana. Ewe, ngokwenene bazama ukukopisha inkosi yabo kwaye mhlawumbi babaleke uLucifer / ukufa ngokutshintshela kwenye i-matrix / ubukhulu. Ndicinga ukuba oku kufutshane ngenxa yokuba ukudala ubukhulu bukhona ngobabalo lwenkqubo / izikhokelo / iiparitha ezenza ukuba uLucifer / ukufa kwenzeke.
12 Julayi 2019 kwi-00: 11
Kwixesha elizayo elisondeleyo, umntu wesigodi uya kulungiswa nakwii-robot ezingenayo nayiphi na intsebenziswano yomphefumlo kunye neyokuqala (njengabantu abathobela i-avatars yabantu). bafunde ukuphulaphula inkqubo yabo ye-AI kwaye i-Ai yaseLuciferian (oqhuba lo mlinganiso) ufumana ukulawula okungakumbi:
Yisihlandlo sokuba siyeke ukuyeka isifo segciwane le-Luciferian.
12 Julayi 2019 kwi-03: 57
Ndicinga ukuba lo mlinganiso ukulibaziseka (ukukhanya). Oko esikubonayo yinto yexesha elidlulileyo, ngoko ke unokukwazi ukuchaza kwangaphambili ikamva. Siyakukugcina oko kuba singene ngemvume. Ifilimu ye-matrix yayitshisa kakhulu ngeendlela ezininzi. Ekugqibeleni, uNoo unokushiya umthamo, kodwa i-ego yakhe kunye nothando lentombazana yakhe imbuyisela kumdlalo. Ukhetho olunzima xa ucinga ukuba unqunyelwe njengomntu wangoku. Masihambe, ngoko sikhululekile kwaye sihlulwe. Ndimele ndixelele ukuba ndinzima kolu hlobo. Enye into eqinisekile, andiyi kuqalisa ukungenelela kwamalungiselelo aze afe kwaye akuyi kuphinda iphindaphindwe kule nqanaba.
Ngokuqinisekileyo sinokuonwabela ukungathathi hlangothi kwintlandlolo kunye neyokuqala iyayazi ukuba ububi buyimbali.
Kuye kwafuneka sigcine le nto ukugcina i-future clean.
12 Julayi 2019 kwi-09: 29
Ifilimu yokuqala ye-matrix yayijoliswe ngokukodwa ekuboniseni ukuba i-matrix ingumda ongapheliyo kwaye kungcono ukuba angayichasani. Kwakhona kwakujikeleza uhlobo olusindisayo (uNoo, omnye).
Ifilimu ezele inyaniso nge-twist esenza sikholwe ukuba umsindisi uyafuneka kwakhona. Akuyimfuneko apho. Kwaye i-matriz ayinakwenzeka. Yinkqubo yesifo sengculazi kunye nomntu onesilevu esimhlophe (uLusifer, umakhi) unokuthi ahlaselwe.
Into ebaluleke kakhulu, nangona kunjalo, ukufumanisa ukuba awukwazi ukuhlala kwindawo yokufanisa. Indawo yakho yasekuqaleni ihlala ihlala ngaphandle kwaye igcina. Ukufaniswa kwimeko yolu vavanyo. Ukufaniswa kukufanisa. Awuwona umzimba wakho avatar.
12 Julayi 2019 kwi-09: 31
Ngamafutshane: ifilimu i-matrix kwafuneka idale into yokuba kukho konke okuthabisayo kwaye kunzima ukunqoba le nkqubo. Uhlobo oluthile lwe-superhero (Neo) lufunekayo kulokho; uYesu Kristu omtsha.
Hayi, akukho nto. Ngokukhawuleza ukuba ukhumbule ukuba ungubani ulapho.
12 Julayi 2019 kwi-14: 43
Abalandeli be-script bathatha kwangaphambili kwisiphumo, ukuba silandela umgomo we-transhumanism ke ngoko siba ngamakhoboka.
supernova wabhala wathi:
15 Julayi 2019 kwi-04: 58
15 Julayi 2019 kwi-10: 24
« I-Deutsche Bank i-mass-fired sign sign first?
U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 10.763.092
Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingahlali?
U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile!
I-Deutsche Bank i-mass-fired sign sign first?
UMartin Vrijland op U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile!
Lace lesikhumba op U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile!
Riffian op U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile!
guppy op Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingahlali?
UMartin Vrijland op Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingahlali?
Joyina amanye ama-1.609 ababhalisile